Oo chit lay — Steemit
Oo chit lay
အသက် 30 ဖွင့်မယ့်အချိုးအကွေ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ဘဝအတွက်အမှတ်များနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်များအတွက် setting စတင်ထောင့်ရုံးတိုးမြှင်တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးဆင်းသက်ဖို့ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုရှိရာအချက်ပါပဲ။
မိတ်ဖက်နှိုငျးယှဉျကဒ်များဖြင့်ကမ်းလှမ်း Excellent ကခရက်ဒစ်နှင့်အတူသူများသည် 10 အံ့မခန်းကဒ်များ Card များကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ 2019 ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိ 0% အကျိုးစီးပွားအားသွင်း5ကဒ်များ Card များကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုသူတို့ကြီး 3-0 turn မတိုင်မီသူတို့န်ထမ်းပြုကြပြီလိုသောအရာကိုအချို့စီအီးအိုမေးတယ်။ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားသင့်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်များနှင့်အန္တရာယ်များကိုယူပြီးမှပိုက်ဆံချွေတာခြင်းမှ, ဒီမှာမတိုင်မီကအားလုံးကိုပြုမိကြသူစီအီးအိုကနေတချို့အကြံပေးချက်ကိုပါပဲ။ အာရုန်သည်စမစ်, KX Group ၏ CEO နှင့်တည်ထောင်သူ ငါဆိုသည်ကားမယ်လို့ပထမဦးဆုံးအရာဟာကမ္ဘာ့ခရီးသွားရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ကိုထပ်တိုးနှင့်အခြားလူများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု excel ရန်ကမ္ဘာလုံးခရီးသွားလာထက်ပိုဘာမျှမျက်စိ-အဖွင့်ရှိပါသည်။
လောကီအတှေ့အကွုံတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကသာပြန်အစစ်အမှန်လောကရှိအပြုသဘောရောင်ပြန်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်အရာကလူကိုပိုမိုဆက်ဆံရေးဖြစ်လာအကြောင်းကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ 25 ငါက 40 ကျော်နိုင်ငံများသို့ခရီးထွက်ခဲ့ကြောင်းနှင့်5နှစ်အဘို့နိုင်ငံရပ်ခြားနေထိုင်ခဲ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန် Be, အစွန်းအပေါ်အရာအားလုံးနှင့်တိုက်ရိုက်ဘဝအန္တာရာယ်။ သငျသညျ 30 ရက်များမှာခင်မှာသင်ကူညီပံ့ပိုးရန်လိုအပ်ကြောင်းမျှကိုမှန်ကန်တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်မျှအပေါင်ခံ / မိသားစုရှိသည်။ ရဲ Be နှင့်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုကအားလုံးကိုအန္တာရာယ်။
သင်နိုင်အောင်ကျရှုံးလျှင်သင်ဆုံးရှုံးရန်နှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုရဖို့ရန်ဘာမျှမရှိသည်, ငယ်ရွယ်လှုံ့ဆော်မှုနှင့် regroup ဖို့အချိန်များများရှိပါတယ်။ အဆိုပါအဟောင်းတွေကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်နှင့်ပိုပြီးသင်တစ်ဦးအက်ကွဲရှိခြင်းမဟုတ်နောင်တမည်ပိုပြီးဆင်ခြေရ။ ကျွန်မအသက် 18 မှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်ငါ့အသက်ကိုငွေစုကိုဆုံးရှုံးများနှင့်ရှေ့ဆက် 26 ကျရှုံးခြင်းမှာကြှနျတေျာ့ဒုတိယအပေါ်နန်းထိုင်၏။ ကြော်ငြာ Takeru အတွက် Hoshino, Monetise ၏ CEO ကောင်းသောအလေ့အထများကိုတည်ဆောက်စေ။
ဒါကြောင့်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု, အလုပ်ကျင့်ဝတ်, ကောင်းစွာအစာစားခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ္ဍာရေးနှင့်အတူစည်းကမ်းခံရ, လေ့ကျင့်ခန်း, အလုပ် / ဘဝနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးရဲ့ဖွစျစေ, အကငျြ့သငျ့ရဲ့အခြေခံဖြစ်ကြသည်။ မျှော်လင့်မထားတဲ့အချိန်လေးကသင်၏အသက်တာ၌ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည့်အခါကရှည်လျားသည်သင်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းအလေ့အထကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ငယ်ရွယ်သူတို့ကိုဖွဲ့စည်းရန်နှင့်သူတို့အသက်အဘို့သင်တို့နှင့်အတူအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Business Insider: သူတို့အသက် 30 turn မတိုင်မီ 30 ရက်အတွေ့အကြုံများလူတိုင်းရှိသင့် jo Burston, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရှားပါး Birds ဂိမ်း၏တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူ နှိမ့်ချသကဲ့သို့ကောင်းစွာတက်စီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။
အစစ်အမှန်ကျွမ်းကျင်မှုကိုပိုမိုကျွမ်းကျင်နှင့်အတွေ့အကြုံကလူမှတက်စီမံခန့်ခွဲသည့်အခါငါသည်သူတို့၏အသက် 20 အရွယ်တွေ့ဆုံရန်လူအများစုဟာနည်းကျွမ်းကျင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုစီမံခန့်ခွဲ၏အယူအဆဖြည့်ဆည်းအလုပ်များဖြစ်ကြသည်။ စကားပြောဆိုမှုနှင့်အများပြည်သူစကားပြော၏အနုပညာအသက်တာ၌နေရာတိုင်းကိုသင်ယူပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုရှာပါ, ပြီးတော့သင်ယူမှုများအတွက်မျးကွုတျငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုရှိခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမှာကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံးတရားဝင်နှင့်အတွေ့အကြုံများမှတဆင့်။ သငျသညျလမ်းလျှောက်ဖို့လိုလမ်းကြောင်းလမ်းလျှောက်သောဆရာကိုရှာပါ။ ထိုအခါသူတို့နှင့်အတူသင်၏အချိန်နှင့်အတူလုံးဝ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောရိုးသားနှင့်လေးစားမှုရှိစေသတည်း။ သူတို့လညျးသငျတို့ထံမှသင်ယူ! ပိုက်ဆံရှိသမျှလစာသိမ်းဆည်းပါ။ ဘယ်လိုဘတ်ဂျက်မှလေ့လာပါနှင့်နေအိမ်ထဲကရသင့်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်သောခြေထောက်ပေါ်ရပ်တယ်။ ဘယ်သူမှသင်သည်တစုံတခုကိုပေးဆပ်ရန်ရှိသည်။ ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေး၏အဓိပ္ပာယ်ကိုဆုံးရှုံး။ ဒါဟာယူဥစ္စာမဟုတ်ဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင် run ။ အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲသေးငယ်တဲ့။ သငျသညျနံနကျစောစောကဤကျွမ်းကျင်မှုလေ့လာသင်ယူနိုင်လျှင်, သင်အနိမ့်အန္တရာယ်သို့မဟုတ်ဂယက်ရိုက်နှင့်အတူကျရှုံးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။ အခြေခံပညာစာရင်းကိုင်နှင့်စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်မှုကြိုးပမ်းပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့်အနာဂတ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခရီးသွားလာနှင့်သင့်ပူဖောင်းထဲက get နဲ့မသက်မသာရ။ ဒါဟာလက်ခံမှု, သည်းခံစိတ်, သည်းခံခြင်းနှင့်အတူကူညီ, ငါတို့ကမ္ဘာကြီးအမှန်တကယ်ဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သင်ပြပါလိမ့်မယ်။ ကြော်ငြာ ဒင်း Ramler, CEO နဲ့မီလန်တိုက်ရိုက်ပူးတွဲတည်ထောင်သူ အထက်နှင့် ကျော်လွန်. သွားသင်လက်ရှိရန်မျှော်လင့်သို့မဟုတ်လုပ်ဖို့ပေးဆောင်နေကြသောအရာကိုထက်ပိုလုပ်နေတာ၏အနုပညာလေ့လာပါ။ ပုံမှန်အလုပ်တစ်ရက်ကုန်ဆုံးသည့်အခါဖြစ်ပါသည်ကြောင့်ပုံမှန်ဝန်ထမ်းဟောင်း5နာရီလောက်မှာရောသမမွှေပါဘူး။ လူတိုင်းသည်ဤလုပ်ဖို့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့သျောလညျးအထကျပါလိမ့်မယ်ဒနှင့်၎င်းတို့၏လက်ရှိလစာတန်းကျော်လွန်တန်ဖိုးကိုနားလည်ပြီးအမြဲမကြာခဏအဖြစ်နှောင်းပိုင်းကငါပွုအဖြစ်ပြန်တည်းခို, ကုမ္ပဏီမှအများဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးကြည့်ရှုသူတစ်ဦးကိုရွေးချယ်အနည်းငယ်မြင့်မားတဲ့အောင်မြင်မှုရရှိရှိပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်အထက်နှင့် ကျော်လွန်. သွားရသူကိုရွေးချယ်အနည်းငယ်အပေါ်မှီခိုအားထားလာမယ့် CEO ဖြစ်သူကြောင့်အခြားလူတိုင်းအတွက်နေ့အဘို့ကျန်ကြွင်းထားပြီးတဲ့အခါမှာအဓိကတာဝန်များကိုအတွက်ကူညီရန်ဤမြင့်မားတဲ့အောင်မြင်မှုရရှိအပေါ်ခေါ်ဆိုရန်အလေ့အထဖြစ်လာသည်။ ဤတူညီသောလူအကုမ္ပဏီ၏အကြီးတန်းမန်နေဂျာဖြစ်လာတက်အဆုံးသတ်နှင့်အများဆုံးပရိုမိုးရှင်းနှင့်လစာမြင့်တက်နှင့်အတူလျော်ကြေးငွေဖြစ်ကြောင်းအံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါတယ်။ Business Insider: ဖိအားအောက်မှာပိုကောင်းဖျော်ဖြေ 13 လျှို့ဝှက်ချက်များ ကြော်ငြာ ဖိလိပ္ပုသည် Weinman, စက်ခေါင်း၏ CEO သင်ဆဲအိမ်မှာအသက်ရှင်နေထိုင်နေစဉ်အတွင်းသင့်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ။ သင်သည်မည်သည့်စစ်မှန်သောကုန်ကျစရိတ်မရှိဘူးစဉ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစိတ်ကူးနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအချိန်ပါပဲ။ မိသားစုများ၏အပြင်ဘက် - - မျှဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်ရှိပါတယ်တဲ့သူကသင်အကြံဉာဏ်ကိုပေးစေခြင်းငှါယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ဆရာသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသငျသညျကိုရှာပါ။ သငျသညျဤအချိန်ကာလအတွင်းသင့်ရဲ့အမှားတွေကနေလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်, သင်သင်တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းပတ်ဝန်းကျင်သို့ရွှေ့ချင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်လျှင်, သင်ပြီးသားမသောအရာကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သိကြပါလိမ့်မယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ, သင်စေနှင့်သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအားဖြင့်မတ်တပ်ရပ်တတ်ရန်သင်ယူပါလိမ့်မယ် - အလွန်အမင်းစက်ခေါင်းများကမှတ်ယူသောစရို။ ကြော်ငြာ ခရစ်ယာန် Mischler, COO, CMO နှင့်ဟိုတယ်လျင်မြန်စွာ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ ကမ္ဘာကြီးကိုခရီးသွားခြင်း! အသစ်သောဒေသများနှင့်ယဉ်ကျေးမှု Explore, ကလွတ်လပ်ရေးဖန်တီးနှငျ့သငျပေးသည်
aasaat 30 hpw int m ae aahkyoeaakwae puggol tait u eat bhawaaatwat aamhaat myarr nhaint aasaatmwaywamkyaungg ninepartaal . darhar aasaatmwaywamkyaungg raimhaannhkyetmyarraatwat setting hcatain htaw ng rone toemyahain tait u pwalhkyinnpyee sainnsaat hphoet ngaat mwat hkaunggparrmhu shirar aahkyet parpell . matehpaat nhao ngya yha nyya kadmyarr hpyintkamlham Excellent k hk raat dait nhaint aatuusuumyarrsai 10 aanmahkaannkadmyarr Card myarrko nhaine yhain kyanypar 2019 hkunhait matinehkainaahti 0% aakyoehceepwarr aarrswin5kadmyarr Card myarrko nhaine yhain kyanypar dar kyount kyanawthoet ko suuthoetkyee 3-0 turn matineme suuthoet n htam pyukya pye losaw aararko aahkyahoet hceaeeao mayytaal . kambhar hkareeswarr saint kopine hceepwarrrayylotengaann ko hcatain myarr nhaint aantararalmyarr ko yuu pyeemha pitesan hkyaway tar hkyinn mha, demhar matinemek aarrloneko pyu mi kya suu hceaeeao k nay tahkyahoet aakyaanpayyhkyet ko parpell . aar rone sai hc mait, KX Group eat CEO nhainttaihtaungsuu ngar sosai karr maallhoet pahtam u sonearar har kambhar hkareeswarrraan hpyitparsai . saint rae hcain hcarr tway hkaw ko htauttoe nhaint aahkyarr luumyarr nhaint yainkyaayymhu myarr nhaint aatuu saint rae saatswalrayykyawmkyinmhu excel raan kambharlone hkareeswarrlar htaat po bharmyaha myethci-ahpw int shiparsai . lawkeathaaeakwone taanhpoemahpyatninesaw hpyitpartaal . ko k sar pyan aahcaitaamhaan lawk shi aapyusabhaw raungpyan haut par lain maalarar k luu ko pomo saatsanrayy hpyitlar aakyaunggkolaee hpyitpartaal . 25 ngark 40 kyaw ninenganmyarrshoet hkareehtwat hkaekyaunggnhaint5nhaitabhhoet ninenganrauthkyarr nayhtinehkae hkaesai . darhar aan sya hcarar hpyithkaesai . taitko kaunggsaan Be, aahcwann aapaw aararaarrlone nhaint titerite bhaw aan tar raral . s ngya sanyya 30 raat myarrmhar hkainmhar sain kuunye panpoe raan loaautkyaungg myaha ko mhaankaan tarwaanwattararr myarr nhaint hpyitninesai myahaapaunghkan / misarrhcu shisai . rell Be nhaint kyeemarrsaw aaungmyinmhu k aarrloneko aan tar raral . sain nineaaung kya shoneshin sain soneshone raan nhaintarar hkaut saim ko rahphoet raan bharmyaha m shisai, ngaalrwal lhuansawmhunhaint regroup hphoet aahkyane myarrmyarr shipartaal . aasopar aahaunggtway ko sain twae lain mai nhaint popyee sain tait u aaatkwal shihkyinn mahote naungt mai popyee sainhkyay r . kyawanmaaasaat 18 mhar kyawanmarae pahtam u sone hceepwarrrayylotengaann aapaw ngar aasaatko ngway hcu ko soneshone myarr nhaintshaesaat 26 kyashonehkyinn mhar kyahanya tay yaar dutiy aapaw naann htine eat . kyawngyaar Takeru aatwat Hoshino, Monetise eat CEO kaunggsaw aalaeaahtamyarr ko taisout hcay . dar kyount aahkyane hceman hkaant hkwal mhu, aalote kyang waat, kaungghcwarahcar hcarr hkyinn shoetmahote saineat puggolrayy bhandarrayy nhaint aatuu hcaeekam hkanr, lae kyint hkaann, aalote / bhaw naalnimate saatmhaatrayy rae hpw hcya hcay,ak ngyaya sangya rae aahkyayhkan hpyitkyasai . myahaaw laint m htarrtae aahkyanelayy k saineat aasaat tar wainrout hcwat hpaat saeet aahkar k shilyarr sai saineat kaaltainshin hpyitkyaungg aalaeaaht ko hcatain taihtaunghkaesai . ngaalrwal suuthoetko hpwalhcaeeraan nhaint suuthoet aasaatabhhoet sainthoet nhang aatuu aahpyit par lain maal . Business Insider: suuthoetaasaat 30 turn matineme 30 raat aatwaeaakyuanmyarr luutine shisaint jo Burston, hcatewainhcarrhcararkaungg taesharrparr Birds gaim eat taihtaungsuunhaint CEO hpyitsuu nhai m hkya sakaeshoet kaungghcwar taat hceman hkaant hkwal hphoet bhaallo laelar par . aahcaitaamhaan kyawmkyinmhu ko pomo kyawmkyin nhang aatwaeaakyuan k luu mha taat hceman hkaant hkwal saeet aahkar ngarsai suuthoeteataasaat 20 aarwal twaesoneraan luu aamyarrhcuhar naee kyawmkyin lotehpawkinehpaatmyarr ko hceman hkaant hkwal eat aayuuaas hpya eet saee aalotemyarr hpyitkyasai . hcakarr pyawwsomhu nhaint aamyarrpyisuu hcakarr pyawweat aanupanyar aasaat tar nayrartine ko sainyuu par lain maal . saint rae hcateaarr htaat saan mhuko shar par, pyeetot sainyuumhu myarraatwat mya kwu tya ngaat mwat hkaunggparrmhu shihkyinn aarr hpyang sainthoet koabhaalshoet pyumai aararko mhar kambhar gyaoh pawtwin aakaunggsone hpyithphoet rairwalhtarr parsai . nhait u hc lone tararrwain nhaint aatwaeaakyuanmyarr mhat saint . s ngya s nyya lamshout hphoet lo lamkyaungg lamshout saw sarar ko shar par . htoaahkar suuthoet nhaint aatuu saineat aahkyane nhaint aatuu lonew, yonekyi hcatehkya rasaw roesarr nhaint layyhcarrmhu shi hcay sataee . suuthoet lanyya s ngya thoet htanmha sainyuu! pitesan shisamyaha lahcar saimsaee par . bhaallo bhaatgyet mha laelar par nhaint nayaain htellk r saint kopine lwatlautsaw hkyayhtout paw raut taal . bhaalsuumha sainsai tahconetahku ko payysaut raan shisai . rapine hkwng aahkwngaarayy eat aadhipparalko soneshone . darhar yuu uhchcar mahotebhuu . hceepwarrrayylotengaann taithkuhcatain run .abhaalsuu myaha m bhaalloutpell sayy ngaal tae . s ngya s nyya nan n kya hcawhcawk i kyawmkyinmhu laelar sainyuu nine shin, sainani m aantararal shoetmahote gayaatrite nhaint aatuu kyashone hphoet bhaallo laelar sainyuu par lain maal . aahkyayhkanpanyar hcarrainnkine nhaint hceepwarrrayy kyawmkyinmhu kyaoepam panpoe kuunye hkyinn nhaint aanargaat par lain maal . noutsoneaanaynae hkareeswarrlar nhaint saint puuhpaungghtellk get nae masaatmasar r . darhar laathkanmhu, saeehkanhcate, saeehkanhkyinn nhaint aatuu kuunye, ngarthoet kambharkyee aamhaantakaal bhaallout yonekyi nine loutaaung sain pya par lain maal . kyawngyaar dainn Ramler, CEO nae melaan titerite puutwaltaihtaungsuu aahtaatnhaint kyawlwan. swarr sain laatshi raan myahaaw laint shoetmahote lotehphoet payysaung naykyasaw aararko htaat po lotenaytar eat aanupanyar laelar par . ponemhaan aalote taitraat konesone saeet aahkar hpyitparsai kyawwng ponemhaanwaanhtamhaungg5narreloutmhar raw sam mwhaay parbhuu . luutinesai i lotehphoet pine hkwin shisai . shoet syaww lanyyaaht kya par lain maaldnhaint ၎innthoeteat laatshi l hcartaann kyawlwan taanhpoeko narrlaipyee aamyaell makyaarhkan aahpyit nhaawinnpine k ngar pwu aahpyit pyan taeehko, kumpanemha aamyarrsone waansaungmhupayy kyi shu suu tait u ko rwayhkyaal aanaeengaal myint marr tae aaungmyinmhu rashi shipartaal . sain aamhaantakaal aahtaatnhaint kyawlwan. swarr r suu ko rwayhkyaal aanaeengaal aapaw mhaehko aarr htarr lar maae CEO hpyitsuu kyount aahkyarr luutineaatwat naeabhhoet kyaan kyawin htarrpyee taeaahkar mhar aadhik tarwaanmyarrko aatwat kuunyeraan i myint marr tae aaungmyinmhu rashi aapaw hkawso raan aalaeaaht hpyitlarsai . i tuunyesaw luuakumpaneeat aakyeetaann maannaygyaar hpyitlar taat aasonesaat nhaint aamyarrsone paromoeshinn nhaint lahcar myinttaat nhaint aatuu lyawkyayngway hpyitkyaungg aan sya hcarar mashipar hpyitpartaal . Business Insider: hpiaarr aoutmhar pokaungghpyawhpyay 13 shhoetwhaathkyetmyarr kyawngyaar hpi lip pusai Weinman, hcaathkaunggeat CEO sain sell aainmhar aasaatshin nayhtine nay hcainaatwin saint kopine hceepwarrrayylotengaann taithku hcatain par . sainsai mai sany hcaitmhaansaw konekyahcarate mashibhuu hcain k hceepwarrrayylotengaann taithku hcatekuu nhaint aatuu hcamsaut hphoet kaungg tait u aahkyane parpell . misarrhcumyarreataapyinbhaat - - myaha bhandarrayy aahceaahcain shipartaal tae suu k sain aakyaannyarn ko payy hcay hkyinn nghaar yonekyi hcatehkya tae sarar shoetmahote taithcone tait u ko s ngya s nyya ko shar par . s ngya s nyya i aahkyane karlaaatwin saint rae aamhartway k nay laelar sainyuu par lain maal, sain sain tait u kawporayyshinn paatwaannkyin shoet shwae hkyin kyaungg sonehpyat shin, sain pyeesarr m saw aararkoalotehpyittaal nhangabhaalshoet sine si kya par lain maal . hceepwarrrayylotengaann aatwaeaakyuan nhaint aatuu, sain hcay nhaint saint sonehpyathkyetmyarr aarr hpyint maat taut raut taat raan sainyuu par lainmaal - aalwanaamainn hcaathkaungg myarr k mhaat yuu saw hc ro . kyawngyaar hkaraityaran Mischler, COO, CMO nhaint hotaal lyinmyanhcwar eat puutwaltaihtaungsuu kambharkyeeko hkareeswarrhkyinn! aasait saw daysamyarr nhaintyainkyaayymhu Explore, k lwatlautrayy hpaantee nhangya s ngya payysai